NayaPatro Blogs: बजारमा छिरेका एक विद्यार्थी: जो मासिक ४० हजार कमाउँछन्, सेयरबाटै गाउँमा ४० रोपनी जग्गा जोडे !
बजारमा छिरेका एक विद्यार्थी: जो मासिक ४० हजार कमाउँछन्, सेयरबाटै गाउँमा ४० रोपनी जग्गा जोडे !
नेपालको धितोपत्र बजारमा विभिन्न उमेर, तहतप्काका व्यक्तिहरुको आकर्षण रहेको पाइन्छ । यही बजारमा जागिर गर्न छाडेर सेयर बजारमा लागी सरकारी अधिकृत सोसरह आम्दानी गरिरहेका युवाहरुको पनि जमात छ । कम पूँजी भएका, तर कम्पनीको मालिक बन्न चाहनेहरुका लागि स्टक मार्केट एउटा गतिलो प्लेटफर्मका रूपमा चिनिन्छ । यही जमातमा भविष्यमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको संचालक बन्ने सपना बुन्दै सेयर बजारमा लगानी गर्दै आइरहेका एक युवा हुन् सुमन श्रेष्ठ । २७ वर्षीय श्रेष्ठको जन्मघर रामेछाप जिल्ला हो भने हाल उनी धोबीचौरका बासिन्दा हुन् । विगत ७ वर्षदेखि सेयर बजारमा सक्रियता जनाइरहेका...
थोरै-थोरै लगानीले सेयरबाट भइनेछ करोडपति, यी सूत्र पछ्याउनुहोस्
सेयरबाट ठूलो कमाईका लागि ठूलै लगानी चाहिन्छ भन्ने हुँदैन । यदि तपाईको लगानी रणनीति सही छ भने सानो लगानीबाट समेत ठूलो कमाई संभव हुन्छ । यसका लागि सेयर सबैभन्दा सही ठाउँ हो । जहाँ नियमित रुपमा सानो–सानो रकम लगानी गर्नुभयो भने त्यसको रिटर्न राम्रो प्राप्त हुन्छ । हुन त सेयर बजारमा जोखिम पनि बढी हुन्छ, तर जोखिमसँगै कमाईको मौका समेत अधिक हुन्छ । यसकारण प्रत्येक महिना सानो–सानो लगानी गर्नुपर्छ, यसको सुरुवात १ हजार रुपैयाँबाट गर्न सकिन्छ । बजार विज्ञहरुको कुरालाई मान्ने हो भने सेयरबजारमा लगानीको आधारभूत कुरा निकै सामान्य छन् । सेयर बजारका आधारभूत कुराहरुलाई...
१० हजारको लगानी यसरी बन्छ ५० लाख !
भनिन्छ कि तलबको तुलनामा खर्च ज्यादै तीव्र गतिले बढिरहेको हुन्छ । तर, मानिसले आफ्नो तलबलाई सही तरिकाले उपयोग गर्ने हो भने त्यो व्यक्तिको तलब बराबरको अलग्गै आम्दानी तयार हुन्छ । तर यसका लागि तपाईले खर्च र लगानीको निकै राम्रो योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ र केही वर्ष प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाई यदि यो लक्ष्य चाँडो हासिल होस् भन्ने चाहनुुहुन्छ भने आफ्नो हरेक महिनाको तलबबाट निश्चित रकम लगानीका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । यदि तपाई कम लगानी गर्न चाहनुुहुन्छ भने तपाईको लक्ष्य पूरा हुन केही लामो समय लाग्न सक्छ । कति समयमा प्राप्त होला लक्ष्य ?यदि तपाईको तलब...
मासु बेच्दै, सेयरमा लगानी गर्दै !
उनको परिचय दिनमै २ पटक फेरिन्छ । कुनै बेला मासु व्यवसायी, कुनै बेला सेयर लगानीकर्ता। सफल मासु व्यापारी मात्र नभई पछिल्लो समय सेयरबाट लखपति हुने लगानीकर्ताको रुपमा चिनिन्छन् रोजिना उप्रेती । गाउँमा कृषि गर्दागर्दै पतिले चलाउने काठमाण्डौको मासु पसल आफैंले सम्हालेकी उनी सेयरबजारकी एक कुशल लगानीकर्ता हुन् । नेप्से बढ्दा र घट्दा दुवै अवस्थामा सम्हालिदै सेयर खरिदबिक्रीमा सक्रिय उनको हसिलो मुहारले आत्मविश्वास झल्काउँछ । २०४८ साल बैशाख २० गते धादिङको रोडाङ्ग गाउँपालिका २ नम्बर वार्डमा बस्नेत परिवारमा जन्मेर धादिङकै गजुरीका बिक्रम उप्रेतीसँग १६ वर्षको...
सेयरको कमाईले काठमाण्डौमा घरघडेरी,बजारबाट करोडपति बनेकी सम्झनाको चाखलाग्दो कथा
मुलुककै अर्थतन्त्रको ऐना मानिने नेपालको सेयर बजार विस्तारै विस्तारित, समावेशी र अत्याधुनिक बन्दै गएको छ । सेयर बजारलाई मिलेनियरहरुको क्रीडास्थल संज्ञा दिने पनि छन् । सेयर बजारमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै बुद्धिमतापूर्वक लगानी गर्नेहरुले अपत्यारिलो गतिमा पैसा कमाएर थुप्रै उदाहरण पेश गर्ने समेत नेपालका बजारमा छन् । पछिल्लो समय सेयर बजार घटेर चौपट भइरहेको बेला र यस्तो बजारमा गरिएको लगानी डूब्छ भनी दुष्प्रचार भइरहेको बेला यही बजारमा सीप हुनेले करोडौं कमाएर देखाएका छन् । विवेकपूर्वक लगानी गरे सेयर बजारले मानिसको आर्थिक हैसियत दिन दुईगुणा रात चौगुणा...